Maanta xooleynu dhoofinaa se waxa muuqata in xoolo iyo hiliba la inoo soo dhoofiyo. Qaytii 1 . Dr.khadar maxamed faahiye. |
Maanta xooleynu dhoofinaa se waxa muuqata in xoolo iyo hiliba la inoo soo dhoofiyo. Qaytii 1 . Dr.khadar maxamed faahiye.
Somaalidu waxay tidhaa: (haani gun bey ka tolantaa)
Dal iyo dad kasta oo arladan ku uumani ,waxa ay ku caano maaleeyn hab-dhaqan –dhaqaale oo u cuntama ,gaws dambeedkana ay dhigaan, ilaalin iyo xafidaad aawadeed waayo waa bu’da iyo salka noloshoodu ka unkanto .
Somaliland dustuurkeedu qaybta koowaad ,qodobkiisa 14 ,waxa uu dhigayaa sidatan :-
Dawladu waxa ay dhiiri gelinaysaa wax soo saarka wadaniga ah sida; Beeraha, Xoolaha nool, Kalluunka, Macdanta, Faleenka, Xabagta iwm iyo warshadaha ku shaqeeya wax-soo-saarka wadaniga ah.)
Waa sax iyo sideey dadweynaha reer Somaliland ugu codeeyeen dastuurka qaranka 1997 ,aqlabiyad dhan %97.3.
Dakhliga cashuur ururinta dawalada iyo Dhaqaalaha Somaliland %30-35, in lagu qiyaaso ayaa ka soo xaroota dhoofka xoolaha nool,halka dakhliga madaniga ah ,ama bulshada miyi iyo magaalaba dakhliga ka soo gala xooluhu dhan yahey % 60-65 qiyaastaas.
Isku celcelis sanad walba dalka waxa ka dhoofa qadar xoola dhan 2 ilaa 3 milyan oo neef oo iskugu jira ( adhi ,geel iyo lo’) tirada ugu badan waa adhi marwalba,waxa aaney ka kala yimaadaan dhamaan ba somaliland,somalia iyo ethoipia . waxa ay u kala dhoofaan %75-80 sucuudiga carabta,%20-25 yemen iyo wadamada khaliijka carabta iyo masar.
Sidee buu u saameeya nolosha bulshada miyi iyo magaalo dheefta neefka xooluhu?
Neefka xoolaha waxa ka faa’ida dheeftiisa dad badan oo uu u horeeyo :-
1.neefka daabaxa ah.
Mulkiilaha neefka ,kirada gaadhiga lagu keenaayo magaalada ,dilaalka ,cashuurta dawlada hoose,khidmada baadhida caafimaad ee xanaanada xoolah, khidmada qawraca neefka iyo macaashka hilib laha.
2.neefka ahminka ah ama dhoof galka ah.
Mulkiilaha neefka,kirada gaadhiga ilaa saylada,dilaalka,cashuurta dawlada hoose,khidmada x.xoolaha,kirada gaadhiga ilaa berbera, khidamada raaciga xoolaha, kirada xeryo xoolaadka ka hor maxjarka, khidmada soo galinta maxjarka iyo caafimaadkiisa, laga soo iibsadaha cawska iyo biyaha, khidmada dawlada hoose ee berbera, cashuurta kastamka berbera,khidmadii xaraaska, macal qabtaha , geel jiidka . khidamada dekada berbera, khidmada sarkaalka dekada ee xoolaha, khidmada tiriyayaasha xoolaha ee dekeda berbera, khidmada rugta ganacsiga.
Waxa iyana intaba sii dheer dhakhliga ka soo xarooda xoolaha oo ku soo noqonaaya kuna dhex wareegaaya dadka iyo dalka gudihiisa, taasi waa ta keentay aasaaska nolosha magaalooyinka tani kaliya waa neefkii xoolaha ahaa, waxa iyana sidan si lamida ah caanihii iyo subag gii xoolaha nool ee wali dhaqmaadka ah ee joogtada ah.
Halkaasi iyo sida aynu kawada dheregsanaheyba waxa ku cad in wax-soo saarka xoolaha nooli inoo yihiin halbawlaha dhaqan dhaqaale ee nolosheena.
Markeynu ogaaney ka dib in xooluhu inoo yidhiin laf dhabar iyo ta aan ka kacno .
Su’aasha isweydiinta mudani waxa ay tahey maxaa aynu dib u galinaa xoolaha tacab iyo dhaqaaleba marka laga yimaado , in aynu hoobaan lacageed ka gurano shacab iyo dawlad ba mooyaane?
Miyey kuu muuqataa in aynu ku hamino ama ku fara adeygno ilaashiga ugu muhiimsan ee dalka iyo dadkaba dhaqaaluhu ka soo galo ee xoolaha ah?
Idinka ayaan idiin dhaafayaa jawaabta.
Waa maxey khatarta soo fool leh xoolaha iyo dhaqaalaha dalka ?
somalidu waxay tidhaa: ( ninka maanta waxa jooga aan garan barito ma odorooso)
xaqiiqda soo wajahani waxa ay tahey :-
1.marka la eego abaaraha joogtada ah iyo gayigeena oo u sameysan degsiimooyinka u haboon abaaraha dhaca iyo roob yaraanta.
2.marka la eego dhul-daaqsimeedkii ku haboonaa dhisto xoolaha iyo daaqsinka oo la ootey,la xaalufiyey amaba la magaaleeyey, cidhiidhina noqotey dhulkii xooluhu calafkiisa ka heli jireena koobtey.
3.marka la eego baaxada tirada xoolaha sida joogtada ah loo dhoofiyo oo aan ka wada go’ikarin dalka xataa lab ha wada ahaadeene .
4.marka la eego xoolaha daabaxa ah ee magaalooyinka dalka lagu qalo maalin walba si hilib dadku u quuto, xoolahaasi dabaaxa u badan ayaa ah kuwo dhedig ah , waliba dhedigiii ku haboona xiliga dhalmada ( ceesaamo) taasina tarantii xoolaha hoos u dhigeyso.
5. marka la eego xoolo yaraanta dalka dalka ka sii kordheysa maalinba ,maalinta ka dembeysa ee ay sababeen dhoofka joogtada ah,iliga bulshada oo la’aamin sanyahey qado aan hililb laheyni in ay tahey qado la’aan , abaaraha is-dabayaal ,reer miyigii oo magaalooyinkii ku soo cararaaya kana caajisey dhiqistii xoolaha siyaasadii dib loogu celin lahaana aaney jirin.
Dhiiladaasi iyo murugaasi iyo in badan oo aanan xusin marka la’isku wada xooriyo waxa ay ifa-faalo hordhac ah u yihiin in ay soo fool leedahey wakhti ay dhacdo in la yidhaahdo soomaalidu waxa ay ahaan jirtey dad xoolo dhaqata ah, oo sheeko iyo riyo dadku ku sheekeystaan ku dambeysa , hadii sida imika wax u socdaan wax laga bedalin!! Sidaasi oo ah sida aan kor ku xusey. Waxa dhici karta sida hilibka digaaga iyo beedka la inoogu soo dhoofiyo maanta in hilibka xoolahana la inoogu soo dhoofiyo. Ceebna umaba naqaano wax dibada la inooga keeno ee faan beynu uba sii naqaanaa!!
Maxaa xal ah ??
Somalidu waxay tidhaa 🙁 marka war la helaa baa talo la helaa )
Waxa lagaga gud bi karaa baan is-leeyahey dhibtaasi sida tan:-
1.in ay dawladu siyaasad horumarineed iyo dhiiri galin u sameyso dadka reer guuraaga ah,xoola dhaqatada iyo beeraleyda ; siyaasadaasi oo gun dhigeedu yahey in laga baajiyo dadyowgaasi in ay magaalooyinka u soo hayaamaan , laguna deegaameeyo halka ay joogaan loona xiiso galiyo goobohooda iyo hawlahooda ba, si ay u joogaan una horumariyaan deegaan kooda.
2. in ay dawladu baneyso dhamaan oodaha lagu ootey dhulkii xooluhu daaqi lahaa ee sharci darada lagu ootey, waliba dawladu ficil ahaan u fuliso qodobkaasi.
3.in dawladu sameyso waxa loo yaqaano (dib u xooleyn , restocking program) oo dadkii xooluhu ka bexeen halkii ay magaalooyinka ka soo gali lahaayeen dib loogu xooleeyo si ay goobohoodu dib nolol uga bilaabaan.
4. dawladu lacag dhan $ 0.5 ha dulsaarto neef walba oo xoolaha dhoofaaya ah mudo 2 sano ah ama ba haloogu qaybiyo lacagta loo jaro dariiqa ceerigaabo ee calaa neefka dhoofaaya loo saarey, lacagtaasi si dawladu ugu maal-galiso mashruuca dib u xooleynta dadyowga abaaruhu barakiciyeen amaba xoolihii ka bexeen, tani waa qayb ka mid ah siyaasad dib u dajineed hadii la fuliyo.
5.in dawladu ku amarto haya’daha dalka ka hawlgala in ay faraan maruucan dib u xooleynta ah si ku filan , hadii la sameeyo dib u xooleyn haboon mudo 2 sano ah ,waxa hubaal ah , xoolo dhaqatadu dib ayey u xooleysanayaan ,iyana wey ku nagaanayaa degsiimooyinkooda, dalkana dhaqaalihiisu uu kobcayaa , xooluhuna wey badanayaan ilaahey idankii .
6. in xoolaha loo beero calaf ay quutaan,sida (sudanic grass ,alfa –alfa etc) siidh kaasi oo ay dawladu u soo iibineyso beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ; xataa buuraha iyo banaanka si furan loogu shiniyeeyo.
Waxa aan rajeynayaa in la fuliyo ama lagu kordhiyo fikiradan kor ku yaala fikiro kale ,dawladuna fuliso intii karaan keeda ah .
By: Dr.khadar maxamed faahiye
Shirkadda Facebook oo u hoggaansantay cadaadiska Turkey
Herei & Kenya kala soco goor dhow Universal TV
Golaha Wasiirrada Somaliland Oo Falanqeeyey Arrmaha Doorashooyinka Dalka Kusoo Foolka…
Falanqeynta nuxurka khudbaddii caleemasaarka ee Joe Biden
Joe Biden oo saxiixay wareegtooyin Madaxweyne
Guddoomiyihii Degmada Hodan Oo Lagu Dilay Muqdisho.
Xogta Dahsoon Shandadii Nukliyeerka oo Trump laga soo reebay
Guddida Dhaqaalaha Oo Ka shiray Diwaangelinta cida ka qaybgalaysa Ka…
Daawo :-Cabdikariin Axmed Mooge oo ku dhawaaqey in Ka Sharaxan…
Xariir Axmed &Najma Nashaad | Waaka Nacabkii Hungoobay | 2021
Shirkaddo Laga Leeyahay Canada Iyo Holland Oo Dalaabaad U Soo…